"Nandray ny teny (ny tenin’Andriamanitra) tamin’ny zotom-po indrindra ireo [mpino tao Beria] ka nandinika ny Soratra Masina isanandro, na marina izany, na tsia."Asan’ny Apostoly 17:11
"Mba tsy ho zaza intsony isika, ka ahilangilana sy ampitambolimbolenin’ny rivotry ny fampianarana samihafa rehetra."Efesiana 4:14
Vetivety foana, tany Tesalonika, ny fampianaran’ny apostoly Paoly dia niteraka ady teo amin’ny mpivavaka tao an-tanàna, izay nitsangana hanohitra azy. Fa tany Beria kosa, ireo izay nahafantatra ny Testamenta Taloha dia nanana toe-panahy tsara kokoa, ka “nandray ny teny tamin’ny zotom-po indrindra”. Tsy hoe finoanoam-poana, fa satria isanandro, ny zavatra reny dia nampitahainy tamin’ny “Soratra Masina” nananany. Tamin’ny alalan’ny Testamenta Taloha no nanaporofoan’i Paoly tamin’izy ireo fa Jesosy no Ilay Mesia nampanantenaina. Hitan’izy ireo tao amin’ny Soratra Masina ny fanamarinana izay nampianarin’ny apostoly azy ireo.
Raha momba ny hafatra kristiana indray, dia mbola tokony hanaraka izany ohatra izany, mandraka ankehitriny, ireo izay mitondra azy sy ireo izay mihaino. Ny mpanompon’Andriamanitra dia manana andraikitra lehibe tsy hanome dika manokana na hanampy ny heviny manokana, rehefa mampianatra ny Tenin’Andriamanitra. Ny “Teny” mihitsy no tokony hambarany am-paharesen-dahatra, miaraka amin’ny toko sy andininy manazava izany.
Ary ny mpihaino dia tokony hanamarina mandrakariva fa tena mifanaraka amin’ny Baiboly izay zavatra reny. Na dia tany amin’ny fiandohan’ny fivavahana kristiana aza, dia efa noresahin’ny apostoly sahady ny fisian’ny mpino izay manatsatso, mandiso sy manolana ny Soratra Masina (2 Korintiana 2:17; 4:2 ; 2 Petera 3:16). Amin’izao fotoana izao, manoloana ny hamaron’ireo fampianarana aparitaka amin’ny fomba rehetra, dia tena zava-dehibe ny miezaka hahafantatra ny Tenin’Andriamanitra sy izay ampianariny marina.